ဒေါက်တာဒေါ်နွယ်နွယ်ဦး (လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အမျိုးသားသွေးဌာန၊ ရန်ကုန်) မေး. အမျိုးသားသွေးဌာနကနေ ဆေးရုံတွေကို သွေးထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ အနေအထားလေး သိပါရစေဆရာမ။ ဖြေ. အမျိုးသားသွေးဌာနက ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအပြင် ကျန်တဲ့အစိုးရဆေးရုံတွေကိုလည်း သွေးထောက်ပံ့ပါတယ်။ အဲဒါတွေက ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး၊ အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံသစ်ကြီး၊ ခုတင် ၅၀၀ ဆံ့ဆေးရုံကြီး၊...
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) “ပင်းတယမီးအိမ်ရှင် ဒေါက်တာသန်းမင်းထွဋ် မြောင်းမြကို ပြောင်းရတော့မယ်”ဆိုသည့် သတင်းစထွက်လာသည်နှင့် ဓနုမြေမှ ငိုကြွေးသံများက လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာထက်တွင် ဟိုတစဒီတစ လွင့်ပြယ်လာခဲ့သည်။ “ဆရာကလည်း ပင်းတယမှာပဲ နေလို့ရရင် နေချင်သေးတယ် . .ဆရာ လုပ်စရာလေးတွေရှိသေးတယ်”ဟု...
အမှန်လေလား၊ အမှားလား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုများ (၁၁)
၊ ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် ၊ မြန်မာမှာသာမက ကမ္ဘာနှင့်အ၀န်း ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ တလွဲယုံကြည်မှုတွေရှိကြသည်။ အမှန်တွေကို မှတ်သားထားသည်က ကိစ္စမရှိ။ မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေကို လွဲမှားစွာယုံကြည်လက်ခံထားပါက ဘ၀နှင့်ရင်းကာ အသက်ကိုပင် ပေးဆပ်လိုက်ရနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမှန်လေလား အမှားလားဟူသည်ကို စာဖတ်သူတို့ တွေးဆဆင်ခြင်နိုင်ရန်...
အမှန်လေလား၊ အမှားလား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုများ(၁၀)
၊ ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် ၊ မြန်မာမှာသာမက ကမ္ဘာနှင့်အ၀န်း ကျန်းမာ ရေးဆိုင်ရာ တလွဲယုံကြည်မှုတွေရှိကြသည်။ အမှန် တွေကို မှတ်သားထားသည်က ကိစ္စမရှိ။ မဟုတ်က ဟုတ်ကတွေကို လွဲမှားစွာ ယုံကြည်လက်ခံထားပါက ဘ၀နှင့်ရင်းကာ အသက်ကိုပင် ပေးဆပ်လိုက်ရနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှု...
၊ ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် ၊ မြန်မာမှာသာမက ကမ္ဘာနှင့်အ၀န်းကျန်းမာရေိးုင်ရာ တလွဲယုံကြည်မှုတွေရှိကြသည်။ အမှန်တွေကို မှတ်သားထားသည်က ကိစ္စမရှိ။ မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေကို လွဲမှားစွာ ယုံကြည်လက်ခံထားပါက ဘ၀ နှင့်ရင်းကာ အသက်ကိုပင် ပေးဆပ်လိုက်ရနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမှန်လေလား အမှားလားဟူသည်ကို...
အမှန်လေလား၊ အမှားလား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုများ(၇)
၊ ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် ၊ မြန်မာမှာသာမက ကမ္ဘာနှင့်အ၀န်း ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ တလွဲယုံကြည်မှုတွေရှိကြသည်။ အမှန်တွေကို မှတ်သား ထားသည်က ကိစ္စမရှိ။ မဟုတ်က ဟုတ်ကတွေကို လွဲမှားစွာ ယုံကြည်လက်ခံထားပါက ဘ၀နှင့်ရင်းကာ အသက်ကိုပင် ပေးဆပ်လိုက်ရနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး...